Tanzania weputara ebe nchekwa COVID-19 na Serengeti National Park
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Tanzania weputara ebe nchekwa COVID-19 na Serengeti National Park
Njem njem • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Safety • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ dị iche iche
Ogige Ntụrụndụ Serengeti
Njem njem nlegharị anya nke anụ ọhịa na Tanzania na-adọta ihe ruru mmadụ nde 1.5 na-eme njem nleta kwa afọ, na-eweta ihe ruru ijeri $ 2.5 na mba ahụ, na-etinye ya dị ka onye na-akpata ego mba ofesi.
Iji mee ka ọ dịkwuo mfe maka ndị njem nleta na-abịa na Serengeti National Park ịnabata njem kwa afọ nke wildebeest, e guzobela ụlọ ọrụ nchịkọta COVID-19.
Ule ga-echebe ma mesighachi ndị njem nleta ahụ ike ha ike n’oge ọrịa a na-efe efe.
Ebe a bụ ihe kachasị ọhụrụ mgbe ndị ọzọ dị ka ntinye nke ụgbọ mmiri nke oge a nke ụgbọ ala na ogige ntụrụndụ mba.
Tanzania ewepụla ebe a na-anakọta ihe nlere Coronavirus na Serengeti National Park iji mee ka ule COVID-19 dị mfe ma dịkwa mfe maka ndị njem nleta.
Nwa akwukwo nke ndi otu oru nke ndi njem nke Tanzania (TATO) na mmekorita ya na ndi ochichi, iwebata ulo oru mkpoko COVID-19 na Serengeti National Park bu otu n’ime udiri nke ngwa ngwa emere n’oge na-adighi anya iji mee ka ndi njem nleta banyere nlekọta ahuike ha di ka akuku. nke nnukwu atụmatụ iji kwado ụlọ ọrụ nlọghachi.
Seronera (ebe obibi n'ime ogige ahụ) COVID-19 nchịkọta nnakọta, nke mbụ ụdị ya, dị n'ime obi Serengeti ma mee ka ule dị mfe maka ndị njem na-aga n'ọdụ ụgbọ mmiri mba Tanzania ugbu a ịnụ ụtọ ụwa kwa afọ njem wildebeest ụkpụrụ.
Ọrụ bidoro na February 13, 2021, na Seronera COVID-19 samples collection center, na-eme ka ọ dịrị ndị njem nleta mkpa iji nwalee mgbe ha na-anụ ụtọ ezumike ha kwesịrị ekwesị n'ime ogige mba na ndị ọzọ na-eme njem nlekọta njem ugwu.
Onye isi okike na njem njem nlegharị anya, Dr. Aloyce Nzuki kwuru, "Nke a bụ ihe akaebe doro anya banyere mkpa isi ngwakọta azụmaahịa dị na ụlọ ọrụ ile ọbịa, ya bụ mmekọ na mmekorita n'ijere ndị njem nleta anya maka ime ka nnwale dị mfe ma dị mfe."
"Mgbe ọtụtụ ọnwa nke nyocha siri ike, ịrụsi ọrụ ike, na nnukwu ego nkeonwe, ụlọ ọrụ nnakọta nke Seronera COVID-19, nke mbụ n'ụdị ọzara, dịla njikere ugbu a maka ndị njem nleta," Maazị TATO, Maazị Sirili Akko kwuru. .
Maazị Akko, onye isi oche nke mkpakọrịta ahụ na ndị ọrụ njegharị 300-gbakwunyere, kwuru na ahụ dị mpako na-ekere òkè ya n'ịlụso ọrịa ahụ ọgụ. Ọ kọwara, “Onye na-anya ụgbọelu [atụmatụ a] na-agbaso usoro nkwekọrịta nchekwa siri ike anyị nwere n’ebe ọ nọ,” ka ọ kọwara, na-agbakwụnye, “Anyị na-aga n’ihu ịnọgide na-enwe nchekwube kachasị elu iji kwụsị nje ahụ ma nyere aka gbochie mgbasa ya na mba anyị kwekọrọ n'usoro nduzi nke Mịnịstrị Ahụ Ike. ”
Emere ihe dịka nyocha esemokwu nke okpomoku, nhicha na usoro nhicha dị ọcha, akụrụngwa nchedo onwe onye (PPE), yana ịchụpụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị ka usoro gọọmentị nyere.
“Anyị kwenyere na nke a ga-abụ nnukwu ahụ efe ụlọ ọrụ ndị njem. Anyị nwere ekele na ekele nye Gọọmentị Tanzania maka ime nke a site na mmekorita nke atọ n'etiti onwe anyị (TATO); Ozi nke Natural Resources na Tourism; na Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly, and Children, ”Mazị Akko kwuru.
Ebe etiti ahụ na-abụ ụzọ kachasị ọhụrụ mgbe ndị ọzọ dị ka ntinye nke ụgbọ mmiri nke ụgbọ ala nke ihe mberede na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ogige ntụrụndụ 4 dị mkpa iji chekwaa ndụ ndị njem nleta na elu nke ọrịa COVID-19.
UNDP-Tanzania kwadoro TATO ego iji tọghata Toyota Landcruiser nke onye otu ya, Tanganyika Wilderness Camps nyere, ka ọ bụrụ ụgbọ ala eji arụ ọrụ nke ọma. Ego ndị ahụ zụtakwara Nnukwu Ihe Nchedo Onwe Onye (PPE) dị mkpa iji chebe ndị njem nleta na ndị na-ejere ha ozi megide ọrịa COVID-19.
E tinyela ụgbọ ala ahụ n'ime ebe ndị njem nlegharị anya bụ, Serengeti National Park, Ngorongoro Conservation Area, Kilimanjaro National Park, na Tarangire-Manyara ecosystem. Ebumnuche ebumnuche nke itinye ụgbọ ala bụ iji gbaa ndị njem nleta ume na Tanzania dị njikere nke ukwuu ime ihe ngwa ngwa na mberede na dịka akụkụ nke atụmatụ mba iji wepụta akwa nnabata maka ndị ezumike.
Christine Musisi, onye nnọchi anya UNDP na Tanzania, kwuru, “gnimara ụlọ ọrụ ndị njem dị ka onye mmepe nke mmepe mmepe nwere ike inye onyinye maka ọtụtụ Ebumnuche Nkwado Sustainable Development (SDGs) n'ihi mgbutu ya na ịba ụba na ngalaba na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, Anyị na-achọsi ike ịnọgide na-akwado gọọmentị na mmepe nke Atụmatụ Mgbasa Ozi Zuru Oke maka ụlọ ọrụ ndị njem nleta na mpaghara Tanzania na Zanzibar. "
Enweta ego mgbanwe mba ofesi na njem ndị njem na Tanzania agbadaala ruo afọ 10 dị ala n'etiti afọ na-agwụcha Ọktoba 2020 n'ihi mmachi njem ndị mba dị iche iche machibidoro site na ọrịa COVID-19. Onu ogugu nke Bank of Tanzania (BoT) na egosiputa na ego Tanzania nwetara site na njem nleta jiri ihe kariri 50 pasent rue $ 1.2 ma e jiri ya tụnyere $ 2.5 ijeri enweta na oge yiri ya na 2019. Edekọtara ego ikpeazụ na October 2010 mgbe mba ahụ nwetara Ijeri $ 1.23 site na ụlọ ọrụ ndị njem.
Nlegharị anya anụ ọhịa na Tanzania na-aga n'ihu na-eto na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 1.5 na-eme njem nleta na-eleta mba ahụ kwa afọ, na-enweta mba ahụ ijeri $ 2.5 - ya na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 17.6 nke GDP - na-eme ka ọnọdụ ya dị ka onye na-akpata ego mba ofesi. Ọzọkwa, njem nleta na-enye ndị Tanzania ọrụ 600,000 ozugbo na ihe karịrị otu nde ndị ọzọ na-enweta ego site na ụlọ ọrụ ahụ.
Ka mba dị iche iche malitere ịgbake na njem nlegharị anya amalitela n'ọtụtụ ebe na-arịwanye elu, ndị ọchịchị Tanzania amaliteghachiri elu igwe maka ụgbọ elu ndị njem mba ofesi site na June 1, 2020, bụrụ mba izizi na mpaghara Ọwụwa Anyanwụ Africa nabatara ndị njem nleta ileta ma nwee ọmarịcha ebe ọ na-adọrọ mmasị.